काठमाडौं । त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जले हेलिप्याडसहित अत्याधुनिक १० तल्ले भवन निर्माणको तयारी सुरु गरेको छ । भवन निर्माणका लागि अस्पताल र भाटभटेनी सुपर मार्केटबीच लिखित समझदारी भएको निर्देशक डा. दीपक महराले जानकारी दिए ।
‘हामीले चाहेर पनि अस्पतालमा यो सेवा विस्तार गर्न सकेका थिएनौं’ निर्देशक महराले भने,‘नयाँ भवनमा इएचएसका विरामीले मात्र पूर्ण रुपमा सेवा पाउनेछन् ।’ डा. महराका अनुसार हाल अस्पतालमा दैनिक ओपिडीमा १६ सयदेखि दुई हजार विरामी आउने गर्छन् । त्यस्तै इमर्जेन्सीमा १५० भन्दा बढी विरामी आउने गर्छन् । त्यसबाहेक शिक्षण अस्पतालमा विशेष किसिमका ११ वटा सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) का साथै ५६ वटा आईसीयू पनि सञ्चालनमा छ ।